Realme XT wuxuu helaa waxqabadka Nightscape ee kamaradda hore | Androidsis
Cusbooneysiin cusub oo software ah ayaa horeyba ugu faafaya OTA Realme XT. Tani waxay ku dareysaa waxyaabo badan oo horumar iyo niyadsamid ah qaybaha kala duwan ee taleefanka, laakiin waxa ugu badan ee arrintan ka muuqda ayaa ah shaqada kaamirada Nigthscape, oo lagu daro dareemaheeda hore.
Muuqaalka aan soo sheegnay wuxuu awood dheeraad ah siinayaa afkiisa hore inuu sawirro fiican ka qaado habeenkii ama xaaladaha iftiinka hooseeya, sidaa darteed hadda qalabku wuxuu noqonayaa mid isweydaarsi badan marka la qabanayo daqiiqado kamarad la sheegay.
Cusbooneysiinta cusub waxay la timid nambarka nooca 'RMX1921EX_11_A.12' waxayna soo bandhigeysaa baarka amniga ee Noofambar 2019. Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu cajiibka badan ee cusbooneysiintu keensatay uu yahay Habka Nightscape ee kamaradda hore. Waxay sidoo kale hagaajineysaa caddaynta sawirada lagu qabtay 64 MP Ultra mode.
Waxaa laga yaabaa inaadan wali helin ogeysiiska cusbooneysiinta, maxaa yeelay waxaa kaliya loo dirayaa tiro cayiman oo isticmaaleyaal ah. Saacadaha soo socda iyo / ama maalmaha xigta waad heli doontaa. Haddii aadan rabin inaad sugto inay taasi dhacdo, Waxaad kala soo bixi kartaa oo ku rakibi kartaa qalabka gacanta xidhiidhkan. Beddelka loogu talagalay cusbooneysiinta waa sida soo socota:
Qalabka Amniga Android: Nofeembar 2019
Nightscape lagu daray kamaradda hore.
Ku habboonaanta caddaynta sawirka markaad isticmaaleysid WhatsApp.
Tayada muuqaalka ballaadhan ee fiidiyoowga ah ee loogu talagalay kamaradda gadaal.
Hoos u dhigista sawaxanka ee jawiyada mugdiga ah.
Lagu hagaajiyay hufnaanta qaabka ULTRA 64 MP.
Shil app oo go'an markii loo wareegayo ULTRA 64 MP mode.
Tayada kamaradda oo loo habeeyay arrimaha midabbada casaanka ah.
Aqoonsiga faraha la xoojiyay.
Dhibaatooyinka la xaliyay:
Dhibaatada ah "Anigu kama diiwaan gelin karin VoWiFi shirkad qayb ah" waa la xaliyay.
Arrin soo bandhigid qoraal go'an oo iswaafaqda qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme XT wuxuu helaa waxqabadka Nightscape ee kamaradda hore